၂၀၀၇ နောက်ပိုင်း Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo မပါတဲ့ ပထမဆုံး El Clásico
28 Oct 2018 . 2:26 PM
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံး El Clásico ပွဲကို ခံစားဖို့ ပရိသတ်တွေ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ဒါဘီပွဲတွေ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလ်လိုမျိုး သမိုင်းနဲ့ချီပြီး အကြိတ်အနယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲမျိုးတော့ မရှိနိုင်လောက်ဘူး။ စပိန်မှာဆိုရင် ဘာစီလိုနာနဲ့ မက်ဒရစ်ဆိုတာက အကြီးဆုံးမြို့နှစ်မြို့။ ဒီမြို့နှစ်ခုအကြားက Rivalry က ဒီမြို့တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အသင်းနှစ်သင်းဆီ ကူးဆက်တာက သိပ်တော့မထူးဆန်းဘူး။ ဘာစီလိုနာက ကတ်တလန်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်၊ မက်ဒရစ်က စပိန်ကို ကိုယ်စားပြုတာကြောင့် ကွင်းတွင်းမှာသာမကဘဲ နိုင်ငံရေးအရပါ ပြိုင်ဘက်သဘောမျိုးဆောင်နေတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလ်ဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်အသင်းတွေဖြစ်သလို အောင်မြင်မှုအများဆုံး ရယူထားတဲ့ အသင်းတွေဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပရိသတ်အခိုင်အမာရထားတဲ့အသင်းနှစ်သင်း၊ Social Media ကဏ္ဍမှာလည်း Follower အများဆုံးအသင်းတွေဖြစ်နေကြလို့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအရ ပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်း ကြီးမားလွန်းတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ဒီနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ပြီဆို တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ကြတဲ့အပြင် ကွင်းတွင်းသာမက ရုပ်သံကြည့်ရှုမှုအများဆုံးပွဲတွေမှာလည်း တစ်ပွဲအပါအ၀င်ဖြစ်တယ်။
၂၀ ရာစုအတွင်း စပိန်ဘောလုံးလောကနဲ့ ဥရောပဘောလုံးလောကကို ရီးယဲလ်အသင်းက လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ၂၁ ရာစုထဲမှာတော့ ဘာစီလိုနာက ရီးယဲလ်အသင်းထက် အောင်မြင်မှု အများဆုံးရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၁ ရာစုမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းက ဆုဖလားစုစုပေါင်း(၃၃)ခုအထိရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရီးယဲလ်အသင်းက (၂၇)လုံးပဲ ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဖလားအကြိမ်အများဆုံးရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့ ရီးယဲလ်က အသာရနေဆဲပါပဲ။ လာလီဂါမှာ ရီးယဲလ်က (၃၃)ကြိမ်၊ ဘာစီလိုနာက (၂၅)ကြိမ်၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလားမှာ ဘာစီလိုနာက အကြိမ်(၃၀)၊ ရီးယဲလ်က (၁၉)ကြိမ် အပြန်အလှန်ရှိပေမယ့် ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံးပြိုင်ပွဲလို့ဆိုရမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာတော့ ရီးယဲလ်က (၁၃)ကြိမ်နဲ့ အောင်မြင်မှုအများဆုံးဖြစ်နေပြီး ဘာစီလိုနာကတော့ (၅)ကြိမ်ပဲရှိသေးတယ်။
အရင်နှစ်တွေတုန်း ဒီနှစ်သင်းဟာ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား (၂)ဦးဖြစ်တဲ့ မက်ဆီ Messi နဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုနဲ့အတူ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုက နည်းနည်းလျော့နည်းသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒဏ်ရာကြောင့် မက်ဆီ အခုပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်သလို စီရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်လို့ပါပဲ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် မက်ဆီ-စီရော်နယ်လ်ဒို မပါတဲ့ El Clásico ပွဲဖြစ်ပြီး ဒီကစားသမား (၂)ဦးမပါလို့ ပွဲက အရင်လောက် အရှိန်မရှိနိုင်ပေမယ့်လည်း သမိုင်းကြောင်းအရ ခါးသီးတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်နေလို့ အကြိတ်အနယ်ရှိဦးမှာ သေချာပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ မက်ဆီ မကစားနိုင်တဲ့ El Clásico ပွဲတွေဆို ရုန်းကန်ရလေ့ရှိပြီး မက်ဆီ မပါတဲ့(၂)ပွဲမှာ သရေနဲ့ အရှုံးရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီရဲ့ ပထမဆုံး El Clásico ပွဲ၊ မက်ဆီ-စီရော်နယ်လ်ဒို မပါဝင်ပေမယ့် နှစ်သင်းစလုံးမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ်။ နူးကမ့်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းကပဲ ရလဒ်ကောင်း ယူနိုင်မလား၊ ဖိအားတွေရှိနေတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းကပဲ မထင်မှတ်တာတွေ လုပ်ပြမလားဆိုတာတော့ . . .
ဘာစီလိုနာ -ရီးယဲလ်အသင်းတို့ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုမှတ်တမ်း
စုစုပေါင်းဆုံတွေ့ခဲ့သည့်ပွဲ – ၂၇၁ ပွဲ
အဓိကပြိုင်ပွဲတွင်နိုင်ပွဲအများဆုံး – ရီးယဲလ် (၉၅)ပွဲ
ခြေစမ်းပွဲတွင် နိုင်ပွဲအများဆုံး – ဘာစီလိုနာ (၂၀)ပွဲ
ပြိုင်ပွဲစုံတွင် နိုင်ပွဲအများဆုံး – ဘာစီလိုနာ (၁၁၂)ပွဲ
El Clásico ပွဲအများဆုံးကစားသမား – မာနိုလိုဆန်းချက်စ်(ရီးယဲလ်- ၄၃ပွဲ)
El Clásico သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား – မက်ဆီ (ဘာစီလိုနာ-၂၆ဂိုး)
ဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံးကစားသမား – မက်ဆီ (ဘာစီလိုနာ – ၁၄ကြိမ်)
ဘာစီလိုနာအသင်း၏ အကြီးမားဆုံး နိုင်ပွဲ – ဘာစီလိုနာ ၇-၂ ရီးယဲလ် (၂၄-၉-၁၉၅၀ လာလီဂါ)
ရီးယဲလ်အသင်း၏ အကြီးမားဆုံး နိုင်ပွဲ – ရီးယဲလ် ၁၁-၁ ဘာစီလိုနာ (၁၉-၆-၁၉၄၃ စပိန်ဘုရင့်ဖလား)
ဘာစီလိုနာ-ရီးယဲလ်အသင်းတို့တွင် ကစားခဲ့ဖူးသည့် နာမည်ကျော်ကစားသမားများ
ဘန်ရှုးစတား၊ မိုက်ကယ်လောဒရပ်၊ လူးဝစ်ဖီဂို၊ ရော်နယ်လ်ဒို၊ ဆာဗီယိုလာ၊ ဂျော်ဂျီဟာဂီ၊ လူးဝစ်အင်းနရစ်၊ အီတူး
Photo:CBS Sports,Independent Newspapers,Getty Images,bestfootballers
၂၀၀၇ နောကျပိုငျး Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo မပါတဲ့ ပထမဆုံး El Clásico
စိတျလှုပျရှားစရာ အကောငျးဆုံး El Clásico ပှဲကို ခံစားဖို့ ပရိသတျတှေ အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီလား။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက လိဂျပွိုငျပှဲတှမှော ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျတဲ့ ဒါဘီပှဲတှေ ရှိကောငျးရှိလိမျ့မယျ၊ ဒါပမေဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလျလိုမြိုး သမိုငျးနဲ့ခြီပွီး အကွိတျအနယျဖွဈခဲ့တဲ့ပှဲမြိုးတော့ မရှိနိုငျလောကျဘူး။ စပိနျမှာဆိုရငျ ဘာစီလိုနာနဲ့ မကျဒရဈဆိုတာက အကွီးဆုံးမွို့နှဈမွို့။ ဒီမွို့နှဈခုအကွားက Rivalry က ဒီမွို့တှကေို ကိုယျစားပွုတဲ့အသငျးနှဈသငျးဆီ ကူးဆကျတာက သိပျတော့မထူးဆနျးဘူး။ ဘာစီလိုနာက ကတျတလနျကို ကိုယျစားပွုတယျ၊ မကျဒရဈက စပိနျကို ကိုယျစားပွုတာကွောငျ့ ကှငျးတှငျးမှာသာမကဘဲ နိုငျငံရေးအရပါ ပွိုငျဘကျသဘောမြိုးဆောငျနတေယျ။
ဒါ့အပွငျ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလျဆိုတာကလညျး ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ အခမျြးသာဆုံးစာရငျးဝငျအသငျးတှဖွေဈသလို အောငျမွငျမှုအမြားဆုံး ရယူထားတဲ့ အသငျးတှဖွေဈတယျ။ နောကျပွီး ကမ်ဘာတဈဝှမျးက ပရိသတျအခိုငျအမာရထားတဲ့အသငျးနှဈသငျး၊ Social Media ကဏ်ဍမှာလညျး Follower အမြားဆုံးအသငျးတှဖွေဈနကွေလို့ ဂုဏျသိက်ခာပိုငျးအရ ပွိုငျဆိုငျမှုကလညျး ကွီးမားလှနျးတယျ။ဒါကွောငျ့လညျး ဒီနှဈသငျးထိပျတိုကျတှပွေီ့ဆို တဈကမ်ဘာလုံးက ပရိသတျတှေ စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့ကွတဲ့အပွငျ ကှငျးတှငျးသာမက ရုပျသံကွညျ့ရှုမှုအမြားဆုံးပှဲတှမှောလညျး တဈပှဲအပါအဝငျဖွဈတယျ။
၂၀ ရာစုအတှငျး စပိနျဘောလုံးလောကနဲ့ ဥရောပဘောလုံးလောကကို ရီးယဲလျအသငျးက လှမျးမိုးနိုငျခဲ့ပမေယျ့လညျး ၂၁ ရာစုထဲမှာတော့ ဘာစီလိုနာက ရီးယဲလျအသငျးထကျ အောငျမွငျမှု အမြားဆုံးရယူနိုငျခဲ့တယျလို့ သတျမှတျနိုငျတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ၂၁ ရာစုမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးက ဆုဖလားစုစုပေါငျး(၃၃)ခုအထိရယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ရီးယဲလျအသငျးက (၂၇)လုံးပဲ ရခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အဓိကပွိုငျပှဲတှမှော ဖလားအကွိမျအမြားဆုံးရယူနိုငျခဲ့တဲ့အပိုငျးမှာတော့ ရီးယဲလျက အသာရနဆေဲပါပဲ။ လာလီဂါမှာ ရီးယဲလျက (၃၃)ကွိမျ၊ ဘာစီလိုနာက (၂၅)ကွိမျ၊ စပိနျဘုရငျ့ဖလားမှာ ဘာစီလိုနာက အကွိမျ(၃၀)၊ ရီးယဲလျက (၁၉)ကွိမျ အပွနျအလှနျရှိပမေယျ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာအရှိဆုံးပွိုငျပှဲလို့ဆိုရမယျ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာတော့ ရီးယဲလျက (၁၃)ကွိမျနဲ့ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးဖွဈနပွေီး ဘာစီလိုနာကတော့ (၅)ကွိမျပဲရှိသေးတယျ။
အရငျနှဈတှတေုနျး ဒီနှဈသငျးဟာ ကမ်ဘာကြျောဘောလုံးသမား (၂)ဦးဖွဈတဲ့ မကျဆီ Messi နဲ့ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo တို့ရဲ့ အားပွိုငျမှုနဲ့အတူ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးခဲ့ပမေယျ့ ဒီနှဈမှာတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုက နညျးနညျးလြော့နညျးသှားတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒဏျရာကွောငျ့ မကျဆီ အခုပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈသလို စီရျောနယျလျဒိုကလညျး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို ပွောငျးရှသှေ့ားပွီဖွဈလို့ပါပဲ။
၂၀၀၇ ခုနှဈနောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျ မကျဆီ-စီရျောနယျလျဒို မပါတဲ့ El Clásico ပှဲဖွဈပွီး ဒီကစားသမား (၂)ဦးမပါလို့ ပှဲက အရငျလောကျ အရှိနျမရှိနိုငျပမေယျ့လညျး သမိုငျးကွောငျးအရ ခါးသီးတဲ့ပွိုငျဘကျတှဖွေဈနလေို့ အကွိတျအနယျရှိဦးမှာ သခြောပါတယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ မကျဆီ မကစားနိုငျတဲ့ El Clásico ပှဲတှဆေို ရုနျးကနျရလရှေိ့ပွီး မကျဆီ မပါတဲ့(၂)ပှဲမှာ သရနေဲ့ အရှုံးရလဒျတှေ ထှကျပျေါခဲ့တယျ။ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီရဲ့ ပထမဆုံး El Clásico ပှဲ၊ မကျဆီ-စီရျောနယျလျဒို မပါဝငျပမေယျ့ နှဈသငျးစလုံးမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ကစားသမားတှေ အမြားကွီးရှိနသေေးတယျ။ နူးကမျ့မှာ ဘာစီလိုနာအသငျးကပဲ ရလဒျကောငျး ယူနိုငျမလား၊ ဖိအားတှရှေိနတေဲ့ ရီးယဲလျအသငျးကပဲ မထငျမှတျတာတှေ လုပျပွမလားဆိုတာတော့ . . .
ဘာစီလိုနာ -ရီးယဲလျအသငျးတို့ရဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုမှတျတမျး
စုစုပေါငျးဆုံတှခေဲ့သညျ့ပှဲ – ၂၇၁ ပှဲ
အဓိကပွိုငျပှဲတှငျနိုငျပှဲအမြားဆုံး – ရီးယဲလျ (၉၅)ပှဲ
ခွစေမျးပှဲတှငျ နိုငျပှဲအမြားဆုံး – ဘာစီလိုနာ (၂၀)ပှဲ
ပွိုငျပှဲစုံတှငျ နိုငျပှဲအမြားဆုံး – ဘာစီလိုနာ (၁၁၂)ပှဲ
El Clásico ပှဲအမြားဆုံးကစားသမား – မာနိုလိုဆနျးခကျြဈ(ရီးယဲလျ- ၄၃ပှဲ)
El Clásico သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမား – မကျဆီ (ဘာစီလိုနာ-၂၆ဂိုး)
ဂိုးဖနျတီးမှုအမြားဆုံးကစားသမား – မကျဆီ (ဘာစီလိုနာ – ၁၄ကွိမျ)
ဘာစီလိုနာအသငျး၏ အကွီးမားဆုံး နိုငျပှဲ – ဘာစီလိုနာ ၇-၂ ရီးယဲလျ (၂၄-၉-၁၉၅၀ လာလီဂါ)
ရီးယဲလျအသငျး၏ အကွီးမားဆုံး နိုငျပှဲ – ရီးယဲလျ ၁၁-၁ ဘာစီလိုနာ (၁၉-၆-၁၉၄၃ စပိနျဘုရငျ့ဖလား)
ဘာစီလိုနာ-ရီးယဲလျအသငျးတို့တှငျ ကစားခဲ့ဖူးသညျ့ နာမညျကြျောကစားသမားမြား
ဘနျရှုးစတား၊ မိုကျကယျလောဒရပျ၊ လူးဝဈဖီဂို၊ ရျောနယျလျဒို၊ ဆာဗီယိုလာ၊ ဂြျောဂြီဟာဂီ၊ လူးဝဈအငျးနရဈ၊ အီတူး